Momba anay - Guangzhou Jinfuya Cosmetics Co., Ltd.
Guangzhou Jinfuya Cosmetics Co., Ltd, dia mpanamboatra matihanina any Shina efa za-draharaha nandritra ny taona maro tamin'ny tarehy kosmetika an'ny OEM sy ODM ary ny varotra iraisam-pirenena, miorina ao Li wan Plaza, Guangzhou, Sina. Hatramin'ny taona 2018, nanangana serivisy fanaovana haitao tokana tokana izahay, ao anatin'izany ny fanomezana serivisy OEM ODM, famolavolana drafitra, consultant amin'ny marketing amin'ny tarehy cosmetika mba hanamora ny fananana sy hampiasana ny marika manokana. Manaraka hatrany ny lanjan'ny kalitao izahay, ny fiaraha-miasa mandresy fandresena ho fanalahidin'ny fahombiazan'ny orinasa.
Ny vokatray dia ao anatin'izany ny aloky ny maso, ny fototra, ny lokomena, ny fanafenana, ny tarehy, ny makiazy, ny vovo-tarehy, ny mascaras, ny eyeliners, ny famafazana ny setroka, ny seruman'ny fitomboan'ny volomaso, ny fitomboan'ny volo ary ny makiazy kosmetika ary vokatra fikoloana hoditra.
Manana orinasa maoderina mandrakotra faritra 20000 metatra toradroa miaraka amin'ny fotodrafitrasa maoderina izahay, ny atrikasa famokarana anay dia natao sy namboarina mifanaraka tsara amin'ny fenitra GMPC. Manana ny efitrano madio madio 100.000 mandeha ho azy ho an'ny kosmetika mifanentana amin'ny singa sy famenoana izahay ary misy rafitra fanaraha-maso famokarana manan-tsaina. Ny atrikasa famokarana ataontsika dia misy rafitra fanamafisam-peo afovoany mandroso sy fitaovana fanandramana ary fanaraha-maso. Manana fenitra fiasa an'izao tontolo izao izahay, ny vokatra tsirairay dia azo aleha amin'ny alàlan'ny rafitra hiantohana ny fitoniana sy ny fiarovana ny vokatra.
Andalana famokarana 15 miaraka amina fandaminana malefaka mba hiantohana ny ora fandefasana. Ny ekipanay matihanina ao anatin'izany ny famolavolana sary, fonosana Logo, varotra dia namboarina mba hanomezana mpanjifa ny serivisy OEM sy ODM, ao anatin'izany ny serivisy marika manokana, serivisy fanontana logo manokana ary serivisy lozisialy. Ary koa ny serivisy marketing marketing.
Ny vokatray rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ary ankafizinay amina tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao, anisan'izany i Etazonia, Amerika atsimo, Canada, UK, alemana, France, Netherlands, Russia, Japan, Australia, Vietnam, Philippines, ary ny hafa. firenena maherin'ny 50.
Izahay dia mandray tsara ireo kaomandy fitsapana kely ho an'ny mpiara-miasa vaovao ary manantena ny hametraka fifandraisana ara-barotra mahomby amin'ny olona eran'izao tontolo izao ary hiara-hitombo ato ho ato.